यौ’न स’म्बन्ध रा’ख्न नमा’नेपछि प’त्नीले लो’ग्नेको गो’प्य अं:ग नै का;टेप’छी ! – Life Nepali
यौ’न स’म्बन्ध रा’ख्न नमा’नेपछि प’त्नीले लो’ग्नेको गो’प्य अं:ग नै का;टेप’छी !
कम्पाला–यौ’नस’म्पर्क ग’र्न न’मानेपछि एक जँ’ड्याहा स्वास्नीले लो’ग्नेको लिं’ग नै का’टिदि’एकी छिन् । घ’टना अफ्रिकी मुलुक युगाण्डाको हो, जहाँको अपाक जिल्लामा ३५ वर्षे बट्रिस अकेनले आफ्ना ४६ वर्षे लो’ग्नेको लिं’ग का’टिदि’एकी हुन् । लिं’ग का’टिएका मोजिज ओकोट अहिले जीवनका लागि सं’घर्ष गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
राति दश बजे जाँ’ड खा’एर घर फर्केकी उनले आफ्ना ला’ग्नेसँग यौ’नस’म्पर्क ग’र्न चाहेपनि लो’ग्नेले अ’स्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि रि’सले चू’र भएकी उनले लोग्नेको लिं’ग का’टेकी हुन् । ‘म बेलुकी ७ बजे शि’कार खे’लेर घर फर्किँदा उ घरमा थिइन ।’ ओकोटले भने, ‘छोरीले पस्केको खाना खाएलगत्तै म सुत्न हिँडे । उ राती १० बजे टिल्ल जाँ’ड खाएर घर फर्की । उ ढोका खो’लिदिन चि’च्या’इरहेकी थिई ।’
ओकोटले स्थानीय अखबारलाई भने, ‘मेरो शरीरमा ह’ल्का पी’डा भइरहेको थियो । उठेर हेर्दा त मेरो पाइण्ट पूरै र’गतले ल’तप’तिएको थियो ।’ उनका अनुसार उनले यौ’नसम्प’र्क ग’र्न अ’स्वीकार गरेपछि आफ्नी स्वा’स्नीले लिं’ग का’टिदिएकी हुन् । ओकोटका अनुसार उनी हरेक र’क्सी खा’एपछि यसरी नै चि’च्याउँदै घर फर्किन्थिन् । लोग्ने भएको नाताले ओकोटका लागि यो अ’सह्य थियो ।
त्यसपछि उनले यसैको दण्डस्वरुप आफ्नी स्वास्नीसँग यौ’नस’म्पर्क गर्न अ’स्वीकार गरेका थिए ।त्यसैको रिसले आफ्नो लिं’ग का’टिएको ओकोटको दा’बी छ । आफ्नै लो’ग्नेको लिं’ग का’ट्ने बट्रिस अकेन अहिले फरार छिन् । प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाइरहेको जनाएको छ ।
Previous समाचार वाचिका, भि’त्री व’स्त्रवि’ना नै समाचार पढ्न आएपछी यस्तो सम्म भयो –
Next “श्री’मान टाढा हुदा म’हिलाले यस्तो ह’र्कद” गरिन्, वा’स्तविकता खु’ल्दा प्रहरी नै च’कित”